Spermidine ntụ ntụ - Wisepowder
Ntụ ntụ Spermidine: Ọ bara uru Hype?
Ahụ mmadụ mejupụtara akụkụ ahụ na anụ ahụ, nke n'aka nke ya mejupụtara ngalaba arụ ọrụ nke ahụ, ya bụ sel. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro ndu niile ka a na -eme ma na -echekwa ya na ọkwa cellular, a na -atụkwa nsonaazụ ihe ndị a na anụ ahụ na akụkụ ahụ. Malite na sel mkpụrụ ndụ, mkpụrụ ndụ mmadụ n'oge usoro mmepe niile n'oge embrayo na -adị iche na sel dị iche iche na -akwaga n'akụkụ ahụ dị iche iche wee rụọ ọrụ dị iche iche otu a.
Mkpụrụ ndụ ahụ na -arụ ọrụ dị iche iche dịka metabolism na homeostasis, agbanyeghị, ha enweghị ike ịme nke a n'onwe ha ma chọọ kemịkalụ dị iche iche, enzymes, na akara mgbapụta iji nyere ha aka imezu nsonaazụ ha chọrọ.
Ụdị sel dị iche iche nwere ogologo ndụ ha dị iche iche ma ozugbo ha gwụchara oge ahụ, ha na -abanye n'ịka nka ma ọ bụ ịka nka, ụdị, mgbe nke a gasịkwara ha agbaji ma ọ bụ mebie ya, na -aka akara njedebe nke ndụ ha.
Ka otu afọ na -aga, ọrụ mkpanaka na -ebu ụzọ gbanwee, na -ebute mgbaàmà anụ ahụ nke ịka nká, n'ikpeazụ. Agbanyeghị, emeela ọtụtụ ụdị nyocha iji mụọ ma ghọta otu esi eme ka ndụ selụ dịkwuo elu, yana mmadụ. N'ihi ọmụmụ ihe ndị a, achọpụtara onye nnọchi anya ogologo ndụ nke na -abụkwa otu n'ime ogige ndị dị mkpa maka mmezi ọrụ dị iche iche nke sel. A na -ahụ ngwakọta a n'ụba n'ahụ mmadụ, a na -akpọkwa ya spermidine.
Imezi ahụike mmadụ na ịkwalite ogologo ndụ nke mkpụrụ ndụ, yabụ, mmadụ, bụ ọrụ bụ isi nke ogige a, n'agbanyeghị na ọ na -ekere òkè na mmeghachi omume kemịkal na metabolic dị iche iche na ahụ.
Kedu ihe bụ ntụpọ Spermidine?
Spermidine bụ polyamine a na -ahụkarị nke dị mkpa maka ịrụ ọrụ nke ahụ niile. Agbanyeghị na ọ naghị arụ ọrụ ọfụma na mmezi ma ọ bụ imepụta spam, a na -akpọ ya spermidine compound n'ihi na achọpụtara ya na mbụ. A na -eme ya n'ime ahụ mmadụ site na omume nke enzyme, spermidine synthase na compound, putrescine.
Enwere ike gbarie Spermidine ka ọ bụrụ spermine na polyamines ndị ọzọ, gụnyere isomer nke spermine, thermospermine. Achọpụtara na ribosomes nke sel, ọrụ bụ isi nke ogige a bụ ịkwalite autophagy nke na -enye ohere ime ka mkpụrụ ndụ dị ọhụrụ n'ime ahụ mmadụ. Ọ na -enwe ike ịrụ ọrụ ndị a site n'ime ka autophagy na ọkwa cellular n'ime ahụ, karịa n'ọkwa elu elu.
N'inye nnukwu ọrụ spermidine na -arụ n'ime ahụ, ijikwa ọkwa ya kwesịrị ịdị mkpa. Agbanyeghị, achọpụtara na ọkwa Spermidine n'ime ahụ na -amalite ibelata ka otu afọ, nke nwere ike belata arụmọrụ nke a na -arụ ọrụ metabolic dị iche iche. Ihe ndị a niile na -ebute ike nke ahụ mmadụ ibelata nke a na -atakarị ụta maka ịka nká, mana ọ bụghị ịka nká na -ebute ya kama ọ bụ nsonaazụ mmebi nke ogige ndị dị mkpa na ahụ mmadụ.
Spermidine ntụ ntụ bụ ụdị mgbakwunye Spermidine nke na -ezube imeju ụlọ ahịa ahụ nke polyamine aliphatic a ma kwalite ịrụ ọrụ nke ahụ.
Akụkọ banyere Spermidine
A na -akpọ Spermidine dị otu a n'ihi na ọ dịpụrụ iche na nwoke mana kemgbe ahụ achọpụtala na a na -ekesa ya na ahụ mmadụ ma na -arụ ọrụ dị iche iche n'akụkụ ahụ dị iche iche. Ọ bụ ezie na ọ dị mkpa iburu n'obi na ọ nwere otu ọrụ n'ime ahụ niile nke bụ mmụba sel na mmeghari ohuru, site n'ịkwalite autophagy. Ọ bụ otu n'ime ndị nnọchi anya ogologo ndụ mmadụ na anụmanụ ndị ọzọ.
Antoni van Leeuwenhoek chọtara onye nnọchi anya ndụ ogologo oge na mkpụrụ nke mmadụ, na 1678 n'agbanyeghị na ọ kọwara ya dị ka kristal. Ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 200 ka e mechara chọpụta na kristal Leeuwenhoek hụrụ bụ spermine, onye nọchiri Spermidine. Agbanyeghị, amabeghị usoro kemịkalụ nke spermidine na spermine na ọ bụ rue 1924 ka achọpụtara ma mụọ ya nke ọma.
Ịga n'ihu na -amụ usoro nke spermidine kpughere ọtụtụ ihe gbasara ọrụ ya na atụmatụ ya kpọmkwem na ahụ mmadụ. Achọpụtara na spermidine, dị ka polyamine ọ bụla ọzọ, bụ ogige kwụsiri ike nke anaghị agbaze ma ọ bụ meghachi omume na gburugburu acidic ma ọ bụ nke bụ isi. Ọzọkwa, a chọpụtara na spermidine nwere ụgwọ dị mma nke na -enye ya ohere ijikọ na ụmụ irighiri ihe dị ka RNA na DNA.
Ọzọkwa, achọpụtara Spermidine dị n'ụba na ahụ mmadụ, ebe ọkwa ya na -amalite ibelata ka otu afọ, n'otu oge ọkwa collagen na elastin ga -agbadakwa. N'oge mmalite nke ndụ, ụmụ mmadụ na -enweta spermidine site na mmiri ara ma ọ bụ usoro nwa ma ka ha na -eme agadi, ha na -enweta spermidine site na ebe nri dị iche iche. Agbanyeghị, isi mmalite nke spermidine ezughị iji mejupụta ụlọ ahịa nke ogige ahụ na -atọgbọ n'ihi mbelata nke mmepụta nke polyamine.
N'ọnọdụ ndị dị otú a, emere ụdị nyocha dị iche iche iji nyochaa ka enwere ike isi mejuo ụlọ ahịa ahụ yana mgbakwunye Spermine nwere Spermidine trihydrochloride ntụ ntụ dị ka ihe na -arụsi ọrụ ike bụ ihe ngwọta maka nsogbu a. Ihe mgbakwunye Spermidine dị ugbu a, a nabatara ya ebe niile dị ka mgbakwunye ndụ ogologo.
Ọrụ nke Spermidine na ahụ mmadụ
Ihe mgbakwunye Spermidine na -arụ otu ọrụ dị ka spermidine ga -eme n'ime ahụ nke mere o ji dị mkpa ịmata isi ọrụ Spermidine na ahụ mmadụ. Achọpụtara na Spermidine dị oke mkpa maka igbochi neuronal nitric oxide synthase ma ọ bụ nNOS, na dị ka aha ahụ na -egosi, a na -egosipụta ya naanị na mpaghara akwara na etiti. Isi ọrụ nke nNOS bụ inyocha na ịhazi ụda vasomotor ma hazie ọbara mgbali elu yana ndozi plastik synaptic na neurons nke etiti.
Mkpuchi nNOS site na spermidine endogenous na spermidine nwere mmetụta neuroprotective, gụnyere mmetụta mgbochi nkụda mmụọ. Ọzọkwa, mgbochi nNOS bụ maka mbelata dị ukwuu na nkwarụ akwara na mbibi nke akwara akwara na -eme ka ọrụ a nke spermidine bụrụ ọrụ nchekwa.
Spermidine, ya na polyamines ndị ọzọ, egosiri na ọ nwere otu mmetụta na okirikiri mkpụrụ ndụ dị ka ihe na -eto eto nke na -akwadokwa isi ọrụ ya; autophagy na ogologo ndụ. Ọzọkwa, spermidine na -ejikọ na ogige dị iche iche iji kwado ọrụ dị iche iche nke ogige ahụ.
Ojiji nke Spermidine ntụ ntụ
A na -eji ntụ ntụ Spermidine dị ka mgbakwunye iji gbochie ụdị ọrịa kansa dị iche iche, ọkachasị hepatocellular carcinoma na fibrosis imeju. Imirikiti ndị mmadụ na -ahọrọ iwere spermidine ntụ ntụ dị ka mgbakwunye n'ihi ike ya ọ bụghị naanị ime ka ogologo ndụ dịkwuo mma kamakwa n'ihi mmetụta nchekwa nke ogige ahụ.
Uru nke Spermidine ntụ ntụ dị ka mgbakwunye
Ejiri Spermidine dị ka mgbakwunye ka emebere na nso nso a mana nyocha sayensị enyerela ya nke nwere ọtụtụ uru n'ahụ mmadụ. Ụfọdụ n'ime uru dị na spermidine ntụ ntụ dị ka mgbakwunye bụ:
· Ebe nchekwa emelitere na arụ ọrụ mmụba ka mma
Ejikọtara ojiji nke spermidine ntụ ntụ na njirimara neuroprotective ọ bụ ezie na nke ahụ abụghị isi ihe na -akpata ịrị elu nke ngwakọta ahụ. Mmetụta dị mma Spermidine na ụbụrụ na cognition bụ nsonaazụ nke ihe mgbochi mkpali ya nke na-egbochi mbufụt na neurons, ya mere na-ebelata ohere nke ọtụtụ ọrịa neurodegenerative dị ka ọrịa Parkinson na Ọrịa Alzheimer.
Nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya lekwasịrị anya n'ịmụta mmetụta polyamine a dị ka polyamines nwere ike inwe mmetụta neuroprotective na neurotoxic. A mụrụ Spermidine n'ụdị anụmanụ nwere ọrịa neurodegenerative, ọkachasị neurodegeneration n'ihi mkparị hypoxic-ischemic. Achọpụtara na mkparị a butere mbufụt site na mbelata nke nitric oxide na ụbụrụ. Agbanyeghị, iji spermidine butere mbelata mbufụt ebe achọpụtara na ọ na -abawanye enzyme, nitric oxide synthase na ụbụrụ nke dị mkpa maka njikọ nke nitric oxide, na n'ikpeazụ, ọgwụgwọ mbufụt. Ọmụmụ ihe a gosipụtara mmetụta mgbochi mkpali nke spermidine na onye nọchiri ya, spermine na vivo n'ụdị anụmanụ.
Emere otu ọmụmụ ahụ n'ụdị anụmanụ nwere nkwarụ moto yana mbelata ọkwa dopamine, n'ihi ikpughe na rotenone. Mkpuchi Rotenone n'ụdị ndị a na -ebute mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa ndị mmadụ na -arịa ọrịa Parkinson. Ndị ọkà mmụta sayensị na -eduzi ọmụmụ ahụ chọpụtara na spermidine nwere ihe antioxidant nke na -enyere aka ịchekwa neurons dopaminergic nke rotenone metụtara na oke ma na -alụso mmetụta nke cytokines proinflammatory na nrụgide oxidative. Ihe nrụgide ndị a na -ebute mmebi nke akwara ozi ma na -ebute mbelata nke ndị na -ahụ maka mgbasa ozi dị ka serotonin, norepinephrine, na dopamine.
Ojiji Spermidine napụtara neurons ndị a n'ụdị anụmanụ wee tụgharịa mpekere moto nke mkpughe rotenone kpatara, ya mere, na -egosi echiche na spermidine nwere ihe na -adịghị emetụta akwara.
N'otu aka ahụ, emere nyocha iji nyochaa mmetụta nke spermidine na -eri nri na arụ ọrụ ọgụgụ isi. Ọ bụ eziokwu a maara nke ọma na ịka nká nwere mmetụta na-adịghị mma na ọrụ ọgụgụ isi, agbanyeghị, a na-eche na enwere ike igbochi mmetụta ndị a site n'iji mgbakwunye spermidine ntụ ntụ.
Mgbe ị na-amụ ụdị anụmanụ nke enyere mgbakwunye spermidine, achọpụtara na ọ nwere ike gafere mgbochi ụbụrụ ọbara wee mụbaa ọrụ hippocampal na ọrụ mitochondrial na ụbụrụ. Nke a dị ezigbo mkpa ebe ọ bụ na hippocampus dị mkpa maka nhazi ebe nchekwa na cognition, na imeziwanye ọrụ ya nwere ike ịba uru karịsịa na mbuso ọrịa physiological na pathological nke ọrụ hippocampal.
N'ụzọ bụ isi, spermidine nwere ihe mgbochi mkpali na ihe antioxidant yana ikike ịgafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara nke na-enye ohere ka ọ bụrụ onye na-ahụ maka akwara na ahụ mmadụ.
· Ngwongwo ndị na-emegide ịka nká na mmụba na-abawanye
Spermidine bụ ihe a na -ahụkarị na ahụ mmadụ nke na -arụ ọrụ dị mkpa na ogologo ndụ sel. Ọ na -ejikọ na DNA, RNA, na ụmụ irighiri ihe ndị ọzọ na -akwụ ụgwọ nke ọma nke na -enye ya ohere isonye na ọtụtụ usoro metabolic. Ihe si na usoro ndị a pụta bụ mmụba sel, mmụba sel na mgbochi ịka nká. Agbanyeghị, ọ nweghị ike ịlụso mmetụta nke ịka nká na ọnwụ mkpụrụ ndụ ka ọ dị otu afọ n'ihi na ọkwa nke spermidine na -amalite ibelata site na etiti.
Ịka nká bụ usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa dị mgbagwoju anya nke na -eme na nzaghachi nye nrụgide na mkpali dị iche iche nke nwere ike bute ọnwụ mkpụrụ ndụ. A na-ekwenye na oriri nke ihe mgbakwunye ntụ ọka spermidine nwere mmetụta mgbochi ịka nká n'ahụ mmadụ site n'ikike o nwere ịkpalite autophagy. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, autophagy bụ usoro ekwentị, nke a sụgharịrị pụtara 'iri onwe onye'. Usoro a bụ maka mgbaze nke akụkụ ahụ na protein na-anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ mebie ya, n'otu n'otu, na-ebute mbibi nke mkpụrụ ndụ na-enweghị ike ịrụ ọrụ ndị dị mkpa. N'agbanyeghị na ọrụ ya dị ka ihe na -emerụ ahụ, autophagy nwere mmetụta nchekwa n'ahụ selụ ka ọ na -ewepụ sel ndị na -adịkwaghị arụ ọrụ.
A na-ejikọ spermidine trihydrochloride ntụ ntụ na ịba ụba autophagy na ahụ mmadụ nke na-enyere aka na usoro ịka nká ka ọ na-ewepụ sel ndị na-adịghị arụ ọrụ, na-akwalite mmepụta nke sel ọhụrụ na arụ ọrụ. Ntughari mkpụrụ ndụ a dị oke mkpa iji gbochie mkpụrụ ndụ adịghị arụ ọrụ ka ọ dịrị n'ime ahụ na -ebute oke ịka nká.
Ntinye autophagy site na ntụ ntụ spermidine na -arụkwa ọrụ na sistemụ ahụ ji alụso ọrịa ọgụ, ọkachasị na sel T. Nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya achọpụtala na ndị mmadụ na -akwalite nkwanye ugwu, dị ka spermidine, nwere ike ịba uru n'ịkwalite mmeghachi omume ndị agadi na ọgwụ mgbochi. Ndị ọrụ nyocha a bu n'obi inyefe ozi a na ogige ọgwụ mgbochi ọrịa ma nwee olile anya na iji ọgwụ spermidine na -eri nri bụ ụkpụrụ maka ndị agadi a na -agba ọgwụ mgbochi.
Ewezuga autophagy, spermidine nwekwara ihe mgbochi ịka nká n'ihi usoro ndị ọzọ na-enyere aka igbochi isii n'ime ụzọ itoolu nke ịka nká na ahụ mmadụ. Ka otu afọ na -aga, mkpụrụ ndụ stem na -efunahụ ikike ha nwere ike na -ekewa n'ime ụdị sel dị iche iche nwụrụla, kwaga, ma ọ bụ hapụ ọrụ ike ha. Nke a na -ebute mgbanwe na -enweghị mgbagha n'ahụ ahụ mmadụ dị ka isi awọ na usoro niile a na -akpọ ike ọgwụgwụ sel. Mmechi spermidine ntụ ntụ na -egbochi ma ọ bụ lụọ ọgụ a nke ịka nká nke nwere ike ịbawanye ogologo ndụ nke sel stem.
Mgbanwe Epigenetic bụ akara ọzọ nke ịka nká nke na -ezo aka na mgbanwe mkpụrụ ndụ ihe nketa nke mkpụrụ ndụ yana usoro sel na physiology n'ihi ikpughe ihe dị iche iche gburugburu. Nsị ndị a na -ebute gburugburu ebe obibi na -ebute mgbanwe na sel nke na -emetụta sel n'ụzọ na -adịghị mma na -ebute ịka nká nke mkpụrụ ndụ na n'ikpeazụ, ọnwụ mkpụrụ ndụ. A na -ejikwa spermidine na -alụ ọgụ maka ihe ngosi a dịka amaara ya maka ịkwalite mmegharị mkpụrụ ndụ.
Ka mkpụrụ ndụ na-etolite etolite, ha na-etinye ike ha niile na nchekwa nke onwe nke na-eduga n'ịgbanwe nkwukọrịta mkpụrụ ndụ na-adịghị mma ka sel ga-emebi sel ndị ọzọ na-anwa ichekwa ahụike nke ya ma kpalite ogologo ndụ. Agbanyeghị, nke a, n'ikpeazụ, nwere ike na -akawanye njọ na ahụike anụ ahụ na akụkụ ahụ, nke bụ ihe a na -ahụkarị na ndị agadi. Agbanyeghị, iji spermidine kwenyere na ọ ga -ebelata ngbanwe nkwukọrịta n'etiti sel iji kwalite ogologo ndụ nke sel niile, na -emerụghị sel ndị ọzọ n'ime anụ ahụ.
Ndị na -edozi na -arụ ọrụ dị mkpa na sel, ọ dịkwa mkpa ka emee usoro metabolic niile nke ọma. Ọ dị mkpa ka ewulite protein nke ọma n'ime ahụ iji hụ na arụ ọrụ nke ọma yana mmezi nke homeostasis. Ka afọ na -aga, protein na -efunahụ ikike ha ijidesi ike na nhazi ha nke na -enye ha ohere ịrụ ọrụ dị iche iche. Nchekasị gburugburu ebe obibi na -emetụta ndị na -edozi protein ndị a na usoro na -eduga n'ịmepụta na idobe ihe owuwu protein ndị a. A na -akpọ nke a ọnwụ proteostasis na ọ bụ akara dị mkpa nke ịka nká.
Ogologo ndụ nke mkpụrụ ndụ na -ejedebe na sel na -abanye n'oge mmetụta uche mgbe telomeres nke sel dị mkpụmkpụ ka sel ghara inwe ike ikewa ọzọ. Telomeres na -ebelata ka sel na -ekewa, n'ikpeazụ ọ ga -erukwa nke pere mpe nke ga -enye ohere nkewa selụ ọzọ, na -eduga n'ịgbachi nkịtị telomere. Mgbe nke a gasị, ụlọnga enweghị ike ikewa wee mechaa nwụọ. Mbelata Telomere bụ akara dị mkpa nke ịka nká nke amụrụla ma nyocha nke ọma maka mmepe nke ogige mgbochi. A na -ahụ Spermidine n'ime ahụ ma ọ bụ ya kpatara imegide mmetụta nke ịgbachi nkịtị telomere, na -enye ohere ka mkpụrụ ndụ kewaa onwe ha ruo ogologo oge.
Spermidine na -akwalite ọrụ mitochondrial ma belata mmetụta nke nrụgide oxidative na ahụ. Nke a bụ akara ọzọ nke ịka nká nke enwere ike imegide site na iji mgbakwunye ntụ ọka spermidine.
· Na -egbochi ụfọdụ ụdị ọrịa kansa ịmalite
Ekwenyere na Spermidine nwere mmetụta mgbochi neoplastic dịka achọpụtarala na ndị mmadụ na-ewere spermidine nwere mbelata ihe ize ndụ nke imepụta carcinoma hepatocellular na ọnọdụ bu ụzọ, fibrosis imeju. Nnyocha e mere n'oge na -adịbeghị anya chọpụtara na spermidine nwere ike ịkwụsị fibrosis imeju ka ọ ghara ịmalite ọbụna n'ụdị anụmanụ nke a na -ekpughere nke ọma na kemịkalụ nwere ike ịmịpụta fibrosis imeju.
Otu nnyocha nlebara anya achọpụtala na iji spermidine nwere ikike igbochi kansa eriri afọ, n'agbanyeghị na ọ dị mkpa ka eme nyocha ọzọ tupu agbakwunye ya na ntuziaka ọgwụgwọ na mgbochi.
Ọzọkwa, achọpụtara na iji spermidine na ndị ọrịa chemotherapy na -anara ọgwụgwọ maka ọrịa kansa na ọnya afọ nyere aka meziwanye nsonaazụ ọgwụgwọ ahụ ma melite ihe ndị na -achọpụta ọrịa kansa.
· Nọgide Na -enwe Ọdịdị Circadian nke ọma
A na -akpọsa ngwa mgbakwunye Spermidine dị ka ụra na -ebido ma na -ejigide ngwaahịa ma na -elekwasịkwa anya na mmelite nke mgbagharị circadian. Nnyocha e mere n'ụdị anụmanụ chọpụtara na oke ụmụ oke, nwere obere spermidine n'ime ahụ ha, nwere nwayọ nwayọ circadian nke na -etolitekarị dị ka nsogbu ihi ụra. Mgbe agbakwunyere na spermidine ntụ ntụ, a hụrụ ụmụ oke ndị a ka ha nwee mgbagharị mgbagharị circadian na -arụ ọrụ nke ọma na okirikiri circadian nkịtị.
· Ịme ntutu, mbọ, na akpụkpọ ahụ mma
Spermidine na -emegharị mkpụrụ ndụ ma na -akwalite uto mkpụrụ ndụ nke na -agbanwe mmetụta nke ịka nká na akpụkpọ ahụ, ntutu na mbọ. Ịka nká na -emetụta ọdịdị nke ụdị akpụkpọ ahụ, akpụkpọ ahụ merela agadi na -apụta dị ka nke na -agbakasị ma na -agbachapụ agbachapụ. Enwere ike ịgbanwe mmetụta ndị a site na iji mgbakwunye spermidine nke akwadoro nke ọma maka ịchọ ntutu, mbọ, na akpụkpọ ahụ mma.
Kedu nri ndị bara ọgaranya na ntụ ntụ Spermidine?
A na -ahụkarị Spermidine n'ọtụtụ ebe nri, ọkachasị nke nri nri Mediterranean. Edepụtara isi nri spermidine n'okpuru:
Ose na -acha akwụkwọ ndụ
Chiiz (ụdị dị iche iche nwere ọdịnaya spermidine dị iche iche)
Mkpụrụ osisi amaranth
Germ ọka wit bụ ebe dị mkpa spermidine, nke echekwara na endosperm ya. Mkpa isi nri a sitere na spermidine bụ na a na -ejikarị ya arụpụta mgbakwunye spermidine dị ka isi mmalite nke ogige ahụ.
Gịnị bụ Spermidine Whem Germ Extract?
Spermidine dị ka mgbakwunye nri na -esite na ọka wit nke bara ọgaranya na spermidine. Iji rụpụta ihe mgbakwunye a sitere na osisi ọka wit, a na -agwọ mkpụrụ ọka wit iji wepụta spermidine ya na endospore. A na -ewepụta mkpokọta ọka wit na -agbaze site na iji ihe na -eko achịcha na -esi na kernel ọka wit. A makwaara ya dị ka mmịpụta mkpụrụ osisi ọka, FWGE, MSC, Triticum Aestivum Germ Extract, na Triticum Vulgare Germ Extract, ngwaahịa a bụ ihe na -enye spermidine ihe mgbakwunye nri na spermidine.
Ojiji nke Spermidine Wheat Germ Extract
A na -atụ aro ịmịpụta mkpụrụ ọka spermidine maka ndị chọrọ ịgbanwe mmetụta nke ịka nká na ahụ ha, dị ka isi awọ, ntigbu akpụkpọ ahụ, na mbelata mmepụta ume. Ụfọdụ ojiji FGWE ndị ọzọ gụnyere:
Anwụ anwụ: Ebe ọ bụ na spermidine na -enwe ike ịkwalite uto sel, mmụba na mweghachi, a kwenyere na mkpụrụ ndụ mebiri site na ikpughe UV nwere ike irite uru na nsonaazụ spermidine. A na -eche na mkpụrụ ndụ ndị a ga -eme usoro autophagic n'ihi oriri spermidine, nke ahụ ga -eduga na -emepụta mkpụrụ ndụ ọhụrụ iji gwọọ anwụ.
Mgbochi ahụ ọkụ na ndị ọrịa chemotherapy: spermidine na -arụ ọrụ dị mkpa na sistemụ ahụ ji alụso ọrịa ọgụ site na njirimara autophagic ya, ọ bụkwa ihe ndị a na -enyere spermidine germ wheat wepụ ntụ ntụ iji kwalite mbibi nke mkpụrụ ndụ kemoterapi mebiri emebi ma na -ebute mmụba nke sel ọhụrụ. Nke a na -enyere aka melite mkpụrụ ndụ T nke dị mma ma na -arụ ọrụ n'ime ahụ nke na -enyere ndị ọrịa a aka ịlụso ọrịa na -efe efe ọgụ.
Njikwa ọrịa autoimmune: Spermidine nwere ihe mgbochi mkpali nke na-enyere aka na njikwa ọrịa autoimmune yana njiri mara ọnya.
Ndị na -arịa ọrịa cancer na -ejikarị mkpụrụ osisi spermidine wheat germ wepụ dị ka a na -eche na ọ ga -akwụsị ọganihu ọrịa kansa ma gbochie uto ya. Ọzọkwa, ekwenyere na iji nri spermidine na -eri nri kwa ụbọchị bara uru iji gbochie mmepe nke ọrịa kansa na mbụ, na ọ nwere ike gbanwee mmetụta nke ọrịa kansa ka ọ na -ejikwa mmetụta ọjọọ nke ọgwụgwọ ọrịa kansa.
Mmetụta dị n'akụkụ nke iji ntụ ntụ Spermidine
Spermidine bụ polyamine a na -ahụkarị na ahụ, nke ngafe ya enweghị mmetụta ọ bụla na ahụ mmadụ. Agbanyeghị, ọkwa dị ala nke spermidine n'ime ahụ nwere njikọ na ịka nká n'oge, mgbada ebe nchekwa na ịrụ ọrụ ọgụgụ isi, yana nkwụsi ike na nkwụsi ike nke anụ ahụ belatara. Ọ na -ebutekwa arụ ọrụ mitochondrial nke na -emebiga ihe ókè nke ịka nka n'ime ahụ.
Ihe mgbakwunye Spermidine nke a na -emepụta site na iji nchapụta ọka wit dị elu yana site na isoro ntuziaka na usoro nchekwa yana weere na ọ dị mma maka oriri mmadụ. Enyochala ihe mgbakwunye ndị a nke ọma na achọpụtabeghị nnukwu mmetụta ọ bụla, yabụ na -akpọ oku ka emebe nyocha ọzọ. Ọ dị mkpa iburu n'obi na enwebeghị mkpesa spermidine ntụ ntụ
Kedu ihe kpatara ịhọrọ ụlọ ọrụ na -emepụta ntụpọ Spermidine Powder?
Spermidine ntụ ntụ bụ ụlọ kwụsiri ike nke a na -ahụkwa n'ahụ. N'ụlọ nrụpụta anyị, a na -emepụta ntụ ntụ spermidine na ụlọ ọrụ ọkachamara, ụlọ nyocha adịghị mma iji hụ na nchekwa ngwaahịa a. A na -emepụta ngwaahịa ahụ site na ntuziaka na usoro nchekwa iji hụ na uru kacha nke ogige spermidine ka ọ na -ebelata ohere nke mmetọ ma ọ bụ mmeghachi omume nke ogige ahụ na ngwaahịa ndị ọzọ. Ọzọkwa, a na -anwale ngwaahịa ahụ ka emechara ya iji hụ na nchekwa ha, ịdịmma ya na ike ya. Ngwaahịa spermidine ọ bụla nke na -agafeghị nnwale a anaghị akwadoro ma kwadebe maka ọrịre kama ezighachiri ya, ngwaahịa ndị ọzọ dị n'otu na -enweta ọzụzụ zuru oke iji hụ na enweghị nsogbu na ịdị mma nke ntụ ntụ spermidine.
Spermidine ntụ ntụ dị n'ahịa na ụlọ ọrụ anyị, n'agbanyeghị na a na -ere ya naanị maka nyocha na ebumnuche mmepe, ma ọ bụ maka itinye ya n'ọrụ n'ọhịa ọgwụ. Spermidine bụ etiti ọgwụ na mkpụrụ osisi dị mkpa na kemịkalụ ọgwụ na ndu. Maka ebumnuche ndị a, achọrọ akwa Spermidine dị elu, nke dị na ụlọ ọrụ mmepụta Spermidine anyị.
Spermidine ntụ ntụ sitere na ụlọ nrụpụta anyị dị maka ịzụta na ngwugwu na ọnọdụ dị iche iche, dabere na ihe ndị na -azụ ahịa chọrọ. Ngwugwu ọ bụla nwere akara nwere ụbọchị nnwale na ụbọchị nrụpụta, iji hụ na nlele njikwa njikwa dị mfe na ọrụ nsuso.
Mortimer RK, Johnston JR (1959) Nkeji edemede "Oge ndụ nke mkpụrụ ndụ Yist Nke Otu". Nature. 183 (4677): 1751–1752. Bibcode: 1959Natur.183.1751M. ma ọ bụ: 10.1038 / 1831751a0. ọdịl: 2027 / mdp.39015078535278. PMID 13666896
Ibuo ọgwụ ezubere iche ọrịa Alzheimer na-egosi mgbochi ịka nká mmetụta ”(Pịa ntọhapụ). Lọ Ọrụ Salk. 12 November 2015. Weghachite November 13, 2015.
Ndi nyocha choputara J147 nke na anoghi ka onwete oria Alzheimer ”. Weghachite 2018-01-30.
Nkọwa nke Ọrịa Alzheimer Ọrịa Neuropathologic Na-agbanwe na Ọnọdụ Nghọta: Ntụle nke Akwụkwọ Peter T. Nelson, Irina Alafuzoff, Eileen H. Bigio, Constantin Bouras, Heiko Braak, Nigel J. Cairns, Rudolph J. Castellani, Barbara J. Crain, Peter Davies, Kelly Del Tredici, Charles Duyckaerts, Matthew P. Frosch, Vahram Haroutunian, Patrick R. Hof, Christine M. Hulette, Bradley T. Hyman, Takeshi Iwatsubo, Kurt A. Jellinger, Gregory A. Jicha, Enikö Kövari, Walter A Kukull, James B. Leverenz, Seth Love, Ian R. Mackenzie, David M. Mann, Eliezer Masliah, Ann C. McKee, Thomas J. Montine, John C. Morris, Julie A. Schneider, Joshua A. Sonnen, Dietmar R. Thal, John Q. Trojanowski, Juan C. Troncoso, Thomas Wisniewski, Randall L. Woltjer, Thomas G. Beach J Neuropathol Exp Neurol. Ihe odide ederede; dị na PMC 2013 Jan 30. E bipụtara ya n'ụdị edezi ikpeazụ dị ka: J Neuropathol Exp Neurol. 2012 Mee; 71 (5): 362–381. ma ọ bụ: 10.1097 / NEN.0b013e31825018f7
Mbido blog Kpọtụrụ anyị Gbasara anyị anyị Products